Ukuphupha unikezela ngezipho zekrisimesi Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Iphupha malunga nokuhambisa izipho ezivela navidad
Xa usiva igama elithi "ukunika izipho," into yokuqala ocinga ngayo yiKrisimesi, usuku lweKrisimesi, usana olunguYesu, umbhiyozo kunye nezipho. Okanye ngoDisemba 6, xa uNicholas kunye nomncedisi wakhe uKnecht Ruprecht behambisa izipho kunye neelekese ebantwaneni. Nangona kunjalo, ukupha izipho kuhlala kufaniswa nokupha okanye ukutshintshana ngezipho ngeKrisimesi. Ukunikezela ngezipho kulisiko elivela kubuKrestu.
Nangona kunjalo, eli gama linokuvela ngokunxulumene nengozi okanye amava angathandekiyo, kwaye ngesiqhelo sisikhuzo: "Okona kungcola!". Umntu ufuna ukuveza ukothuka kunye nomdla.
Kwakhona ekuchazeni amaphupha isipho sinokufunyanwa ngengqondo yesipho. Ngokufanelekileyo, xa utolika iphupha elinjalo, iimeko ezihamba nazo kufuneka ziqwalaselwe ngokusondeleyo.
Nabani na onamava wesipho ngokweli binzana likhankanywe apha ngasentla ephupheni unokuzimela ngokuzikhangela kwisichazi-magama sethu sephupha ngesihloko ebesithetha ngaso. Chwetheza nje isimboli yephupha lakho kukhangelo olungasekunene kweli phepha, umzekelo "ingozi" okanye "ikeyiki" ukuba uwe phantsi ephupheni.
1 Uphawu lwephupha «Bescherung» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Bescherung» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Bescherung» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Bescherung» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uphawu lwephupha "ukunika izipho" lubonwa njengesipho ngexesha lephupha, oku kunokuba ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha kwi iimeko zokuhlala ezintle Iingoma. Kubomi bokuvuka komphuphi kuya kubakho utshintsho okanye isigqibo esitshabalalisayo, ngenxa yoko imeko yakhe iya kuphucula.
Isipho seKrisimesi njengephupha elihlala lizisa iiyure ezimnandi umntu ochaphazelekayo. Ukuba umphuphi unika abanye abantu izipho xa enika izipho ephupheni, uya kwabelana ngolonwabo el mundo Ukuvuka nabanye kwaye ngaloo ndlela kuzise uvuyo kwabanye abantu. Kwelinye icala, ukuba unikwe isipho ephupheni lakho, kuya kufuneka uyazi ngokuthandwa kwayo ebomini bokuvuka.
Ukuba ufumana abantwana abonwabileyo kwindawo yamaphupha abalinde isipho esizayo, unokuzibona ukhululekile. mathuba kwaye ujongane nokuvela kobomi. Ukuphupha akukhathali kangako malunga nokuba ikamva likuphathele ulonwabo kunye nempumelelo. Apha ubonisa ubuntwana obuthile nokungakhathali.
Ukuba, ngokunxulumene nesipho sezipho, uSanta Claus oneendevu ezimhlophe ubonwa ephupheni ngeKrisimesi, kunokwenzeka, umphuphi uya kuthi kungekudala asebenzise izibonelelo. Iprogreso yinyani ebomini bakhe. Ukuba ufumana isipho esivela kuNicholas ngokwakho, lo mfuziselo umele uxabiso oontanga bakho abalibonisayo kumaphupha.
Ukuba awufumani sipho sincinci ephupheni, kodwa iphakheji enkulu, lo mfanekiso kufuneka uvavanywe ngokuqinisekileyo-umntu olalayo unokulindela ukuba abe nakho okuhle kwezemali kunye nexesha elihle lokonwaba kungekudala.
Uphawu lwephupha «Bescherung» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, isipho esihambelanayo seKrisimesi sinokuba sephupheni kwi ubudlelwane bosapho obusebenzayo Iingoma. Umnqweno wokudibana kusapho unokufihlwa ngasemva komfanekiso wephupha.
Ukunikezelwa kwezipho nguMntwana onguYesu kwimeko yokubonakaliswa kwephupha, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, kude kube ngoku ukungahoywa ulwazi ukuzekelisa. Ngoku umphuphi kufuneka ayazi le venkile yolwazi ngaphakathi kwakhe ukuze ayisebenzise kwixa elizayo.
Ukuba ukupha izipho ephupheni kuhamba kunye nokumangaliswa okanye ukumangaliswa, oku kunokuba ngumqondiso omnye. imo elungeleleneyo itolikwe. Nangona kunjalo, ukuba izipho ezinikwa ngamaphupha zithathwa njengentlekele, umntu ekuthethwa ngaye kufuneka ajongane neemvakalelo ezicinezelweyo.
Uphawu lwephupha «Bescherung» - ukutolika kokomoya
Ngokwembono yokomoya, uphawu lwephupha "lubonisa" ngengqondo yotshintshiselwano ngezipho. iitalente zokuyila kwaye ubonise amandla ophuphayo ongakawaboni. Ngoku kuya kufuneka ubakhathalele kwixa elizayo ukuze ukhule ngokomoya.